Njengoba izilinganiso imoto inquma ekilasini yayo?
Kuleli zwe lanamuhla, imoto ngayinye ine eziningana izici, phakathi okuyinto endaweni ekhethekile hlala ububanzi, ubude obuphelele - okuthiwa Ubukhulu imoto. Lezi zinkomba hhayi kuphela zikuvumela ukuba ichaze isikhala elalihlala umshini, kodwa futhi ukubala isikhala ukuthi uludinga for ezihlukahlukene aqondisa, ezifana turning 90 degrees noma ukujika. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu nenqubo kuncike ekilasini imoto.
Sekukonke imingcele imoto ukusiza ukuhlukanisa izimoto ezifanayo futhi iqembu kubo baba izigaba eziningana. Nokho, isakhiwo esinjalo awusiwo uhlamvu ngamazwe. imibukiso ezintathu ezinkulu emhlabeni Ukwahlukaniswa izimoto: European, Japanese futhi American.
Esokuqala siwukuthi ukuhlukahluka izimoto ihlukaniswe eziyisishiyagalolunye izigaba, noma amakilasi. Emongweni lesi sakhiwo kukhona Ubukhulu sangaphandle imoto. Ngakwelinye ihlangothi, wesibili kusekelwe ivolumu yenjini ogibele imoto, futhi ubukhulu bawo. Esihluke yokugcina kusukela ezimbili zokuqala enwetshiwe setha ngemibandela: ucabangela hhayi kuphela umthamo yenjini, kodwa futhi ivolumu kwelinye lamagumbi imithwalo kanye gumbi umgibeli, kanye nezilinganiso imoto nokubaluleka ngemakethe yalo.
Yiqiniso, ngezigaba European futhi uyakucabangela izindleko imoto, futhi iqoqo ongakhetha ezifakiwe. Kule ndaba, ngezigaba ngamunye kungase kubhekwe njengokuvamile okunemibandela, njengoba umngcele phakathi izingxenye - kunalokho esilufifi. Cabanga isakhiwo European kabanzi. Kuyo ngamaqembu 6 ezinkulu 3 extra, okuhlanganisa izimoto, akuhlobene nezinye iyiphi ingxenye.
Iqembu izimoto ezincane kakhulu. Ubukhulu leqembu imoto ingeqi 3.6 amamitha amathathu ubude 1.6 amamitha ububanzi. Lesi sigaba kungenziwa ngokuphepha labizwa ngokuthi izimoto ezincane, okuyinto zenzelwe Friend nobe emigwacweni yase dolobheni. Ngenxa yobukhulu bawo amancane, babe umnotho omuhle futhi zinethuba lokuthuthuka yokupaka.
Ubukhulu leqembu imoto kancane ngaphezulu: 3.6-3.9 m ubude futhi 1.5-1.7 m ububanzi. Uhlobo ezidumile umshini nge injini, akuvamile esingeqile 1.6 amalitha.
Abamele le ngxenye kukhona jikelele - okulula compact futhi angabacwasi evulekile. It has ehlukahlukene yasakazwa ashukumisayo kanye nokusebenza ushayela.
Ngokwengxenye enkulu lokhu izimoto umndeni, okwethulwa cishe zonke izinhlobo umzimba. Elinesimo ingaphakathi libanzi futhi semali umthwalo.
Okunethezeka izimoto, okuyinto befanele basonta business class. onobuhle replenishment kule mkhakha ikakhulukazi wahlanganyela abakhiqizi imoto kanokusho.
Executive Car ekilasini, okuyinto libhekene lenqwaba ongakhetha, ingaphakathi libanzi futhi ukhululekile futhi ubude abevile 5 amamitha.
amakilasi engeziwe (S, M, J) zihlanganisa izimoto ezemidlalo, ezimotweni nezimoto, kokuba engu- okusezingeni eliphezulu, ngokulandelana.
"Renault Espace 4": incazelo, imininingwane, izithombe
Kuyini imoto ephephe kunayo yonke emhlabeni ngo-2013, unyaka? Isilinganiselwa Car
Ipaneli yensiza VAZ 2110 uchungechunge AMC, Flash kanye STREET STORM. Incazelo kanye nezici
Uwoyela Motor "Ubude Quartz 9000 5W30": ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Kungani sidinga lens e izibani, futhi kanjani ukuzifaka?
Kungani eze Izicabucabu ebuthongweni bakho na? Dream Kuhumusha inikeza ukucaciseleka
I-Benoit Garden - indawo entsha yamasiko nezemfundo eSt. Petersburg
Sinusitis ezinganeni: Izimpawu kanye Ukwelashwa. Ukubonisana kanye isazi sezifo zezingane
Chest ubuhlungu - iwuphawu lwenye, izizathu zihlukile
Carrot ikhekhe mafutha. izitsha yokuHlawula: zokupheka
Okumnandi kakhulu zokupheka hookah
Ukudla okunempilo: Izinzuzo namaHlomu we-Muesli
Isaladi Kirieshki nge corn kanye ukuhlobisa etafuleni lakho!
Yikuphi imisipha abasebenza lapho edonsa?
Art. 15 soMthethosisekelo WaseRussia nekuphawula. Ukuhunyushwa Art. 15.4 soMthethosisekelo
Le Campanella ithenda iyizimbali nomculo ...